Ururka Xamaas Oo Mar Kale Duqeeyay Koonfurta Israa’iil – somalilandtoday.com
Ururka Xamaas Oo Mar Kale Duqeeyay Koonfurta Israa’iil
(SLT-Qasa)-Diyaraadaha Dagaalka Israa’iil waxay xalay duqeeyeen Xarumo Milliteri oo ay Dhaqdhaqaaqa Islaamiga ee XAMAAS ku leeyihiin Koonfurta Marinka Qasa.
Idaacadda Radio of Al-aqsa ee magaalada Qasa ayaa sheegtay inay Diyaaradaha Dagaalka iyo kuwa Darooniska ee Isreal ay xalay duqeeyeen 3 Fadhiisin oo ku yaalla Deegaanka Khaan Yoonis ee Koonfurta Marinka Qasa, iyada oo uu burbur xooggan soo gaadhay goobaha la duqeeyey.
Ilo dhinaca Caafimaadka ayaa sheegay in aanay cidna wax ku noqonin duqeymahaasi, balse uu dab ka kacay xarumaha la duqeeyey.
Dhinaca kale, Dagaalamayaasha XAMAAS waxay xalay Hoobiye ku duqeeyeen Koonfurta Israel, iyadoo Maamulka Golaha Gobalka Eshkol ee Isrel ay yeeriyeen Dayaaanka Digniinta, si ay dadka rayidka u galaan goobo ay kaga badbaadi karaan duqeymaha XAMAAS.
Duqeymaha ay Israel iyo XAMAAS isweydaarsadeen ayaa waxa uu imaanaya iyadoo ay Dowladda Masar heshiis xabbad-joojin ah kala dhex dhigtay labada dhinac.
Hoggaamiye Sare oo ka tirsan Ururka Islaamik Jihaad, Khadiir Xabiib waxa uu ku eedeeyey in dhinaca Israel doonaynin inay ku dhawaaqaan Xabbad-joojin, iyagoo ka baqanaya carro dadweyne, ka hor Doorashadda Barlamaanka ee Israel ka dhici doonta bisha soo socota ee April 9-da.